Jowhar.com : Somali Leader News - News: Dowlada Kenya oo sheegtay in ay soo badbaadiyeen labo ruux oo ay Alshabaab afduubteen
April 24 2014 11:57:10
Dowlada Kenya oo sheegtay in ay soo badbaadiyeen labo ruux oo ay Alshabaab afduubteen
Milatariga Kenya ayaa sheegay in labo sarkaal oo ka tirsan shaqaalaha gargaarka ay ka soo badbaadiyeen gacanta Al-shabaabka Soomaaliya.
Warkan oo ay shaacisay Bbcda ayaa lagu sheegay in Daniel Njuguna and James Kiarie oo Labadaba Kenyaan ah lagu baarayo hadda isbitaal ku yaal magaalada Dhoobley.
Mr Njuguna ayaa u shaqeynayay Hay�ada (MSF),halka Mr Kiarie uu ka mid ahaa shaqaalaha Care International,sida Ciidamada Kenya ay shaaca ka qaadeen,laakiin MSF ma aysan xaqiijin in Mr Njuguma uu ka mid ahaa shaqaalaheeda.
Si kasta ha ahaatee ururka Alshabaab ayaahore u shaaciyay in labadan ruux ay qaateen diinta Islaamka isla markaana ay sii daynayaan oo meeshii ay doonaan aadi karaan. Hase yeeshee warkan ku saabsan in ciidamada Kenya ee ku sugan dalka Soomaaliya ay soo badbaadiyeen ayaan wax jawaab weli ka bixin ururka Alshabaab.
0 Comments · 1644 Reads
Jowhar.com744,284 unique visits